SR 900 – Martin Luther King Jr. Way South Daraasada Jidk – Tallaabooyinka xiga iyo sahaminta | WSDOT
homeagency projectsOnline open housesSR 900 – Martin Luther King Jr. Way South Daraasada JidkTallaabooyinka xiga iyo sahaminta
SR 900 – Martin Luther King Jr. Way South Daraasada Jidk – Tallaabooyinka xiga iyo sahaminta
Waxaan wali ku jirnaa wajiyada hore ee shaqadaan qorshaynta, jawaabtaaduna waxayn naga caawin doontaa jihaynta fikradaha iyo xeeladaha oon gadaal ka qiimayn doono xili jiilaaleedkaan.
Jadwalka Barashada Wadada SR 900
Laga bilaabo Xagaaga ilaa dayrta 2020, waxaan kala shaqayn doonaa saamileeyda iyo bulshooyinka aaga, waxaana xog ku aruurin doonaa kulanada furan ee oonleenka iyo xog aruurin, waxaan aruurin doonaa aana qiimayn doonaa xogta xog aruurinta, waxaana bilaabi doonaa qiimaynta badqabka iyo taraafiga waxaana baaris ku samayn doonaa xaaladaha bii’ada.
Laga bilaabo dayrta ilaa jiilaaka 2021, waxaan abuuri doonaa fikrado lagu salaynaayo fikradaha bulshada iyo qiimaynta xogta, waxaan fikradaha la wadaagaynaa bulshada waxaana qaadaynaa fikrado aruurin dheeraad ah, waxaana bilaabaynaa abuurista warbixinta qabyada ah.
Xagaaga 2021, waxaan soo koobi doonaa natiijooyinka warbixinta kama danbaysta ah, waxaana kusoo bandhigaynaa bogga daraasada ee oonleenka ah.
Jawaabtaadu waa muhiim!
Waxaan doonaynaa inaan fahano waxyaabaha aad kala kulantay ku safrida marinka SR 900. Fadlan geli dhawr daqiiqo si aad u buuxiso xog aruurintaan si aad noola wadaagto walaacyadaada aadna noogu sheegto dookhyada aad la doonayso marinka. Xog aruurintu waxay xirmaysaa Nofeembar 13, 2020.